Mgbanwe nwa oge na ọrụ ahụike dị na Barnet - Oakleigh School na Early Years Intervention Center
site: Steve Ebert / NHS North Central London CCG
Bipụtara: 21 October 2020
Emeela mgbanwe nwa oge na ụmụaka na ndị ọrụ ahụike ahụike na Barnet. Iji hụ na NHS nwere ike ịga n'ihu na-enye nlekọta kachasị mma maka ndị obodo n'oge oge oyi na ọrịa COVID-19 na-aga n'ihu, ọtụtụ ọkwa nwa oge maka ọrụ ahụike maka ụmụaka na ndị na-eto eto ekwuputala.
Mgbanwe ndị a dị nwa oge malitere na izu gara aga ma anyị chọrọ ijide n'aka na ndị nne na nna na ndị nlekọta mpaghara mere ka ha mara. Anyị ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkekọrịta ozi a na ezinụlọ site na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ akwụkwọ gị, akwụkwọ akụkọ na ọwa mgbasa ozi mmekọrịta.
Mgbanwe ndị a gbasoro nyocha ọrụ ụmụaka na ndị ọrụ ahụike gbasara Barnet, Camden, Enfield, Haringey na Islington, mpaghara ndị NHS kpọrọ aha dị ka etiti etiti London.
Mgbanwe ndị ahụ gụnyere mmechi nwa oge nke ụmụaka na ngalaba mberede nke ndị na-eto eto na Royal Free Hospital na Mahadum College London Hospitals (UCLH) site n'oge mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri. Lọ ọgwụ Whittington na North Middlesex University Hospital gbasawanyere ngalaba iji gboo mkpa ọ bụla. Etlọ ọrụ mberede Barnet Hospital emeghekwala mgbe emechiri ụlọ na-adịru nwa oge na oge ọkọchị.
Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara mgbanwe nwa oge a na weebụsaịtị North London Partners.
Ndokwa ndị a na-adịru nwa oge ga-ekwe ka NHS lekwasị anya n'ihe onwunwe ma hụ na ọrụ ụmụaka na ndị na-eto eto enweghị ike ịdaba na ọgba aghara ma ọ bụrụ na enwe mmụba na ọchịchọ n'ihi ọrịa ahụ.
A gwara ndị nne na nna na ndị nlekọta nke ụmụaka na ndị na-eto eto ka ha kpọọ NHS 111 ma ọ bụ gaa na ntanetị https://111.nhs.uk, ka ha nwee ike iduzi ha rụọ ọrụ kacha mma maka ha. A ga-akpọtụrụ ndị nne na nna nke ụmụaka na-enweta nlekọta na-aga n'ihu ma ọ bụ nke akwadoro ozugbo ọ bụrụ na enwere mgbanwe ọ bụla na ndokwa ndị dị ugbu a.
Anyị emepụtala usoro nke iji kwalite mgbanwe ndị a nke ị nwere ike ịkọrọ ndị nne na nna na ndị nlekọta.
Download ha ebe a:
NCL Paediatrics RF mmechi
NCL Nkà Mmụta Ahụike NHS 111
Nkwukọrịta na Njikọ